I-China Futha I-Cellulose Fibre Yomkhiqizi Nomhlinzeki Wokunciphisa Umsindo | Longou
Ukufafaza i-Cellulose Fiber Picture Show
Inkambu Yokufaka Isicelo:
Ijimu, izitshalo zezimboni, amaTheminali, amaVillas, amafulethi, Izakhiwo zeHhovisi, izikhungo zezeMidlalo, amakamelo ezinsimbi ezisebenza ngogesi, Izindawo ezinjengamahhotela, Amabha, i-KTV, njll.
Ukusebenza okuyisithupha okuphezulu kokufafaza i-cellulose fiber:
1.Ukunciphisa umsindo nomsindo
Imicu yemvelo inesakhiwo se-porous. Bangakwazi ukumunca amandla omsindo ngempumelelo, banciphise futhi basuse umsindo futhi bangafuthwa ebusweni obungaphansi kwesakhiwo ngqo, kepha don’t kuthinta isikhala sokuqala sokumisa.
2. Ukushisa okushisa
Ukumelana okushisayo kwe-cellulose fiber kuze kufike ku-3. 7R / in, ukulingana kokusebenza kokushisa okushisayo kungu-0,0039 w / mk, Ngokwakhiwa kwesifutho, kwakha isakhiwo esihlangene ngemuva kokwakhiwa, kuvimbela ukuhanjiswa komoya, kwakha ukusebenza kahle kakhulu kokuvikela nokufeza inhloso yokwakha amandla kagesi.
3. Ukucisha umlilo
Ngokucubungula okukhethekile, kunomphumela omuhle kakhulu ekunciphiseni ilangabi. Uphawu olusebenzayo lungavimbela ukushisa komoya, linciphise izinga lokusha futhi lukhulise isikhathi sokutakula.
4. Ukuhlola izinambuzane nokuqinisekisa isikhunta
Inomphumela omuhle kakhulu wokulawulwa kwezinambuzane.
5. Ezempilo nokuphepha
U-100% we-fiber cellulose yemvelo, ayiqukethe ukotini we-silicate noma i-fiber fiber. Akuyona into enobuthi futhi ayicasuli futhi ayicasuli isikhumba nomgudu wokuphefumula. Ngenkomba yezokuphepha ephezulu, ayiqinisekisi kuphela impilo yabahlali, kepha futhi nokuqinisekisa impilo yomsebenzi.
6. Ukufakwa okulula
I-ecocell yokufafaza i-cellulose fiber isetshenziswa ngumshini okhethekile nemishini yokufafaza ukwakhiwa. Imvamisa, idivaysi idinga kuphela abasebenzi abangu-2-3, amamitha ayi-300-500square wokusebenza wokufafaza ngokwesilinganiso angaqedwa ngosuku, kuya ngezimo zokwakhiwa kwesiza. Ukufafaza i-cellulose fiber kubiza amahora angaphansi kokusebenza kunezinye izinto ezifanayo futhi kungonga izindleko ngokungaqondile.
Langaphambilini I-Granular Cellulose Fiber yokwakhiwa komgwaqo we-SMA
Olandelayo: Ukwakha Usimende Okwengeziwe Isitashi u-Ether ukuqina nokugcinwa kwamanzi
ukuvikelwa kwemvelo okuluhlaza
Thuthukisa impilo yesevisi
Izinto zokuvala umoya uhlelo lokuvikela umsindo
Futha i-cellulose fiber